Shan ruux oo aano qabiil loogu dilay tuulada Muuri ee gobolka Shabeellaha Hoose – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muuri – Mareeg.com: Tuulada Muuri oo ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xalay aano qabiil loogu dilay ilaa 5 ruux oo rayid ah. Deegaanka Muuri dhacaa jidka laamiga ah, inta u dhaxeysa xeradii Laanta-buuro iyo garoonka diyaaradaha Lambar 50.
Dadkaan la laayey waxaa Mareeg Media u xaqiijiyey qof ka mid ah dadka deegaanka, kaasoo sheegay in saaka deegaankaas ay ka jirto cabsi iyo kala shaki.
Sida qofka deegaanka u sheegay Mareeg Media, dadka xalay lagu laayey Muuri ayaa waxaa sabab u ahaa aano ka dhalatay 3 askari oo saddex maalmood ka hor lagu dilay deegaanka Lambar 50 oo aan wax badan ka fogeyn Muuri, islamarkaana laga qaatay qoryihii ay wateen.
“Xalay waxaa Muuri lagu dilay 5 ruux oo ahaa beeralley, waxaana loo dilay aano qabiil” ayuu qofkaas oo magaciisa qariyey u sheegay Mareeg Media.
“Saddex maalmood ka hor ayaa deegaanka Lambar 50 lagu dilay 3 askari oo gaari rakaab ah la socday, kuna sii jeeday Marko, waxaana laga qaatay qoryihii ay wateen, taas ayaana keentay in xalay dadkaan rayidka ah lagu dilo Muuri” ayuu sidoo kale yiri goobjoogahaan.
Maleeshiyada dadka ku dishay Muuri ayaa ku beel ah saddexdii askari ee horay loogu dilay Lambar 50, waxaana muuqata in dilkaasi ku dhacay qaab aano beeleed ah.
Deegaanada Muuri ayaa waxaa horay ugu dagaallay maleeshiyo beeleedyo kazoo kala jeeday labo qaabiil, waxaana xalliyey dowladda Soomaaliya, hase ahaatee waxaa muuqata in mar kale uu halkaas ka kacay col kale oo ay ku lug leedahay beel aan ku jirin dagaalladii hore.